Waa Kuma Qofka Ay Geeridiisa Ka Baroor Diiqayaan Jilayaasha Ugu Caansan Hindiya? |
Waa Kuma Qofka Ay Geeridiisa Ka Baroor Diiqayaan Jilayaasha Ugu Caansan Hindiya?
Jilaaga caanka ah ee reer Hindiya Amitabh Bachchan, oo Soomaalidu ay u taqaanno Cali Dheere ayaa ka qeyb galay aaska Sheetal Jain, oo xog heyntiisa ahaa muddo ka badan 30 sano.
Bachchan oo ay wehlinayeen jileyaal kale ayaa maqribnimadii Sabtida tagay goobtii tacsida, wuxuuna muujiyay sida uu uga murugeysan yahay geerida ku timid Sheetal oo ay aad isugu dhawaayeen.
Sawirro uu shaaciyay telefishinka NDTV, oo warbixintan aan kasoo xigannay ayaa sidoo kale lagu arkayay Abhishek Bachchan (Wiilka Cali dheere) iyo xaaskiisa Aishwarya Rai Bachchan oo aabahood ku wehlinaya munaasabaddaas oo ka dhacday magaalada Mumbai.
Jileyaal kale ayaa sidoo kale ku sugnaa goobta, waxayna sagootinkii ugu dambeysay u sameeyeen Sheetal Jain oo ahaa soo saare filim oo aad looga yaqaannay dalka Hindiya iyo meelo badan oo ka mid ah caalamka.
Mr Jain oo muddo gaaban xanuunsanaa ayaa ku geeriyooday isbitaal lagula tacaalayay xaaladdiisa.
“Bogga rasmiga ah ee uu Bachchan ku leeyahay internet-ka ayaa lagu soo qoray: ” Sheetal Jain, oo ahaa maamulahaygii, isla markaana xog haye ii ahaa xaaladihii adkaa iyo kuwii sahlanaaba, ayaa saaka isbitaalka ugu geeriyooday xanuun daran oo muddo gaaban hayay… waxaa naga baxay nin ku dhawaad 40 sano qeyb ka ahaa qoyskeenna”.
“Wuxuu ahaa 77 sano jir, aaskiisana waxaa Sabtidii lagu sameeyay qabuuraha Pawan Hans ee ku yaalla xaafadda Vile Parle ee magaalada Mumbai”.
Sheetal Jain, oo ilaa intii uu dhimanayay ahaa maamulaha khaaska ah ee Amitabh Bachchan ayaa sidoo kale soo saare ka ahaa filimkii Bade Miyan Chote Miyan, oo ay sanadkii 1998-kii isla jileen Bachchan iyo Govinda.
Qoraal uu Amitabh Bachchan ugu baroor diiqayay saaxiibkiis ayuu sidoo kale ku yidhi: “Waxa uu muddo ku dhawaad 40 sano ah iga qaaday culeyskii howsheyda, isagoo si hufan oo heer sare ah u gudanayay shaqada, maantana aniga ayaa medkiisa u qaaday safarkii ugu dambeeyay”.
Rug caddaagan muddada dheer kusoo jiray jilista filimada ayaa ammaan dheer u jeediyay maamulihiisa geeriyooday, wuxuuna sheegay inuu waligiis xasuusnaan doono.
Jilaaga kale ee caanka ah ee lagu magacaabo Anupam Kher, oo Soomaalidu qaarkood ay u garanayaan “Aaw Baska”, ayaa baroor diiqda ku saabsan geerida Sheetal Jain soo dhigay bartiisa Twitter-ka.
“Waxaan ka murugooday inaan ogaaday geerida soo saare Shri #SheetalJain ji. Waxaan aqaannay muddo dheer inuu ahaa xog hayaha Mr. @SrBachchan. Wuxuu ahaa nin aad u sharaf badan oo akhlaaq fiican leh. Alle Samir haka siiyo qoyskiisa”, ayuu yidhi.
Anupam Kher ayaa qudhiisu waxa uu ku jiray filimka Bade Miyan Chote Miya nee uu soo saaraha ka ahaa Mr Jain.